के रेमडेसिभरले पनि कोरोनाका बिरामी निको हुँदैनन् ? | News Polar
के रेमडेसिभरले पनि कोरोनाका बिरामी निको हुँदैनन् ?
अमेरिकी कम्पनी जिलिएडले उत्पादन र वितरण गरिरहेको रेमडेसिभर औषधि पनि कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित बिरामीको ज्यान बचाउन पर्याप्त सक्षम नरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । संगठनले गरेको क्लिनिकल परीक्षणमा रेमडेसिभरको सहायताले कोभिड–१९ का बिरामीलाई अस्पतालमा रहने अवधि बढाउने वा त्यस्ता बिरामीलाई बचाउने सम्भावना निकै कम रहेको देखिएको छ, भारतीय अखबार अमर उजालाले लेखेकाे छ ।
शुरुशुरुका दिनमा कोरोनाको उपचारमा यही इन्टिभाइरल औषधि दिइएको थियो । हालै मात्र कोरोना भाइरसबाट स्वस्थ भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उपचारमा पनि यो औषधि प्रयोग गरिएको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले चार वटा औषधिको परीक्षण गरी सुझावहरु अघि सारेको छ । जसमा रेमडेसिभरका अलावा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन, एचआइभी प्रतिरोधी लोपिनाभिर–रिटोनाभिर र इन्टरफेरान सामेल छन् । यी परीक्षणमा ३० देशका ११,२६६ जना वयस्क बिरामीलाई सामेल गरिएको थियो । अध्ययनमा के पाइयो भने कोरोनाको उपचार गराइरहेका तर अस्पतालमा लामो अवधिसम्म बस्नु पर्ने बिरामीमा यसको केही असर देखिएको छैन ।
संगठनकी प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामिनाथनले कोरोना उपचारमा अप्रभावकारी ठहरिएका हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन र लोपिनाभिर–रिटोनाभिरको प्रयोगमा गत जुन महिनामा रोक लगाइएको जानकारी दिइन् ।
गत मई १ मा अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनले रेमडेसिभरलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि मन्जुरी दिएको थियो । त्यसपछि यस औषधिलाई आधिकारिक रुपमै विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
नेपालमा पनि काेराेनाभाइरसका गम्भीर बिरामीकाे उपचारमा रेमडेसिभर चलाउन थालिएकाे छ । तर यसकाे नतिजा र प्रभावकारिताका बारेमा प्रष्ट विवरण सार्वजनिक भएका छैनन् ।
प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७७, १२:२७:३१